Editor, Author at MinSayYar - Page 595 of 611
8th May 2020 Editor
သားသမီး လိုချင်လျှင်နှင့်ဘယ််သူခွဲခွဲ မကွဲလို လျှင််” လူသိနည်းသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ”ရှင််မကွဲဘုရား
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် သားသမီး လိုချင်လျှင်နှင့်ဘယ်သူခွဲခွဲ မကွဲလို လျှင်” လူသိနည်းသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ”ရှင်မကွဲဘုရား အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စအခက်အခဲများ ချစ်သူရည်းစားကိစ္စများအဆင်ပြေစေဖို့ ဘယ်သူခွဲခွဲတသက်လုံးလက်တွဲနိုင်စေဖို့ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးဒေါင့် ကြား မှာဗြမ္မာသားပိုက်ပုံနဲ့စေတီတစ်ဆူရှိပါတယ်။ကလေးလိုချင်ဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး ရှေးယခင်ကနေ ယခုအထိဆုတောင်းကြတယ်။ ကလေးမရတဲ့သူတွေ ကလေးရဖို့ခက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလေးရကြတယ်။အဲဒီဘုရားလေးရဲ့အရှေ့မှာ ရှှင်မကွဲဘုရားဆိုတာရှိတယ်။ချန်ပီယံတင်ညွန့်ကပြု ပြင်တယ် လူတွေစည်လာတော့ ဘုရားဘွဲ့ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ အဲဒီဘုရားမှာ အိမ်ထောင်ရှင်တွေချစ်သူရည်းစားတွေ ဆုတောင်းကြ ပူဇော်သမှုပြုကြပါကလောကကြီးမှာဘယ်သူခွဲခွဲတို့မကွဲကြပဲ အမြဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်မှုကိုရစေပါတယ် လို့မှတ်သားဖူးပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးအချစ်ရေး အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ကောင်းသောစေတနာအဟုန်တို့ဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ “အရဟံသိဒ္ဓိ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Credit ################### Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် သားသမီး လိုချင်လျှင်နှင့်ဘယ်သူခွဲခွဲ မကွဲလို လျှင်” လူသိနည်းသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ”ရှင်မကွဲဘုရား အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စအခက်အခဲများ ချစ်သူရည်းစားကိစ္စများအဆင်ပြေစေဖို့ ဘယ်သူခွဲခွဲတသက်လုံးလက်တွဲနိုင်စေဖို့ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးဒေါင့် ကြား မှာဗြမ္မာသားပိုက်ပုံနဲ့စေတီတစ်ဆူရှိပါတယ်။ကလေးလိုချင်ဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး ရှေးယခင်ကနေ ယခုအထိဆုတောင်းကြတယ်။ ကလေးမရတဲ့သူတွေ ကလေးရဖို့ခက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလေးရကြတယ်။အဲဒီဘုရားလေးရဲ့အရှေ့မှာ […]
ညသန်းခေါင် (၁) နာရီကျော်ကျော် လောက် တရေးနိး အပြင်ထွက် လိုက်သောအခါ…
ညသန်းခေါင် (၁) နာရီကျော်ကျော် လောက် တရေးနိး အပြင်ထွက် လိုက်သောအခါ… “အသက္ ၉၀ အေမ ” ဟင် …..အမေ …ဘာလုပ်မလို့လဲ …ည သန်းကောင် ၁ နာရီကျော်ကျော် လောက်တရေးနိး အပြင်ထွက်လာတဲ့ မလဲ့ ..အမေ့ကို ထမင်းဝိုင်း မှာ ကုန်းကွကွ မြင်လိုက်ရတယ်။ ” အမေ ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်း စားမလို့ ….”ထမင်းအုပ်ဆောင်းဖွင့်လျက်သား တန်းလန်း နဲ့အမေကဖြေပါတယ်။ အော်…ဟုတ်လား…လဲ့ဝင်းပြင်ပေးမယ်အမေ။ ညနေထဲက ဖယ်ထားတဲ့ ငါးဘတ်မွှေဟင်းငါးပိရည်ချိုပန်းကန် ခဝဲသီးဂျော်ဂျက်ရောင်ဟင်းရည်ပုဂံကိုအမေ့အရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်။ ညနေက ဝယ်ထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ဟင်းရည်ကို နောက်နားမှာခပ်ရှိုရှို ပို့ထားလိုက်တာ …“ငါ မုန့်ဟင်းခါးပဲစားမယ် ငါ့ကိုမုန့်ဟင်းခါး ပဲပေး …”မုန့်ဟင်းခါးက ဘယ်အချိန်ထဲကချက်ထားတာလဲမသိဘူး … အမေရဲ့အမေဝမ်းနူး နေအုန်းမယ် ရာသီကလဲပူတယ်ဆိုတော့ […]
ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့အား ရပ်ကွက်မှလက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံတွင် ဆက်လက်ပြီး Quarantine ဝင်နေရ…
ထောင်ဒဏ် အနှစ်20 လောက်ချပြစ်ရမှာ ကဲ….! မွတ္ကေရာ……😏 ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့အား ရပ်ကွက်မှလက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံတွင် Q ဆက်ဝင်နေရ… Case 50 တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရပြီး နေအိမ်တွင် Quarantine နေဖို့ကို နေထိုင်သည့်မြို့နယ်ပြည်သူများက လက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံတွင်ဆက်လက် Q ဝင်နေရ Quarantine ရက်ပြည့်ပါက ဆက်လက်တရားစွဲဖို့ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ Case-50 တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့ ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသွားသောကြောင့် နေအိမ်တွင် Quarantine နေဖို့ ၎င်းတို့နေထိုင်မြို့နယ်များမှ ပြည်သူများက လက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံ၌သာ ဆက်လက်ပြီး Quarantine ဝင်နေရပြီ Qရက်ပြည့်ပါက ဆက်လက် တရားစွဲဆိုဖို့ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ Credit ##################### unicode ထောင်ဒဏ် အနှစ်20 လောက်ချပြစ်ရမှာ ကဲ….! မှတ်ကရော……😏 […]
ဘုရားပေါ်တွင် ဘီယာ သောက်စားခြင်းများ ပြုလုပ်သည့်အမျိုးသား (၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂)ဦးရဲ ့လုပ်ရပ်
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဘုရားပေါ်တွင် ဘီယာ သောက်စားခြင်းမျာ ပြုလုပ်သည့်အမျိုးသား (၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂)ဦးရဲ့လုပ်ရပ် 7.5.2020.ခုနစ် မစိန်တောရကျောင်း တောင်တလုံးရှင်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် တမူးပုဂံ ဘုရားပေါ်တွင် ဘီယာသောက်စားခြင်းမျာ ပြုလုပ်သည့်အမျိုးသား (၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂)မစိန်တောရကျောင်တိုင်ဆရာတော်မှ့မြို့မရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားတိုင်ကြားခဲပြီး နောက်နောင်ယခုလို ဘီယာသောက်စားခြင်းမဖြစ်စေရန် လူငယ်လေးမျာ၏မိဘများကိုခေါ်၍ အပ်နှံခဲပြီး ပဏမအနေဖြင့် ခံဝန်ကတိထိုးခိုက်လိုက်ပါကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ဘုရားပေါ်တွင် အရက်ဘီယာသောက်စားခြင်း မဖွယ်မယာပြုခြင်းများတွေ့ရှိခဲပါက သာသနာ ညိုးနွမ်းမှု့ ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ပုံ/မစိန်တောရကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦအောင်ဌေး တကောင်ကျား နေပြည်တော်တိုင်း(မ်)မီဒီယာအဖွဲ့ မှု့ခင်နှင့် သတင်းစုံအဖွဲ့ချုပ် Online News Agency ######################## #Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ဘုရားပေါ်တွင် ဘီယာ သောက်စားခြင်းမျာ ပြုလုပ်သည့်အမျိုးသား (၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၂)ဦးရဲ့လုပ်ရပ် 7.5.2020.ခုနစ် မစိန်တောရကျောင်း တောင်တလုံးရှင်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် တမူးပုဂံ ဘုရားပေါ်တွင် ဘီယာသောက်စားခြင်းမျာ ပြုလုပ်သည့်အမျိုးသား […]
ကူညီပေးကြပါအုံးဗျာ …. ဒုတိယ အင်းစိန် မဖြစ်အောင် တာဝန်ရှိသူများ ကယ်တင်ပေးပါ
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ကူညီပေးကြပါအူးဗျာ …. ဒုတိယ အင်းစိန် မဖြစ်အောင် တာဝန်ရှိသူများ ကယ်တင်ပေးပါ ထောက်ကြန့်မြို့ ရတနာသီရိဈေးသစ်ကြီးမြင်ကွင်းလေးတခုပါ ရောင်းသူ ဝယ်သူမည်သူမှနှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာသွားလာရောင်းဝယ်နေကြပါသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာမှပြောဆိုထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိပါအများသိအောင်ဈေးကို လော့ဒေါင်းချတယ်ပြောတာတကယ်တန်းကြတော့ ပွဲဈေးထက်လူစည်ကားနေတာကိုသိနေပါသော်လည်းတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများမှ အများပြည်သူကျမ္မာရေးအားဂရုပြုအလေးထားသောအနေဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန် ပုံနှင့်တကွတင်ပေးလိုက်ပါသည်အများပြည်သူကျမ္မာရေးအတွက်ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါ Credit ######################## #Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ကူညီပေးကြပါအူးဗျာ …. ဒုတိယ အင်းစိန် မဖြစ်အောင် တာဝန်ရှိသူများ ကယ်တင်ပေးပါ ထောက်ကြန့်မြို့ ရတနာသီရိဈေးသစ်ကြီးမြင်ကွင်းလေးတခုပါ ရောင်းသူ ဝယ်သူမည်သူမှနှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာသွားလာရောင်းဝယ်နေကြပါသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာမှပြောဆိုထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိပါအများသိအောင်ဈေးကို လော့ဒေါင်းချတယ်ပြောတာတကယ်တန်းကြတော့ ပွဲဈေးထက်လူစည်ကားနေတာကိုသိနေပါသော်လည်းတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများမှ အများပြည်သူကျမ္မာရေးအားဂရုပြုအလေးထားသောအနေဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန် ပုံနှင့်တကွတင်ပေးလိုက်ပါသည်အများပြည်သူကျမ္မာရေးအတွက်ဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါ Credit
အလုပ်နားနေရသည့် အထည်ချုပ်လုပ်သားများကို ဥရောပသမဂ္ဂစတင်ထောက်ပံ့
အလုပ်နားနေရသည့် အထည်ချုပ်လုပ်သားများကို ဥရောပသမဂ္ဂစတင်ထောက်ပံ့—————————-မြန်မာငွေကျပ်သိန်း၈သောင်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိ ယူရို၅သန်းအထိ ထောက်ပံ့မည်ဟု ကြေညာထား————————-ရန်ကုန်၊မေ ၇ရက် အလုပ်နားထားရသည့် မြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်သားများအပေါ် ထောက်ပံ့ပေးမှုအစီအစဉ်များအား ဥရောပသမဂ္ဂက မေလ ၁ရက်နေ့ မှစပြီး လုပ်ဆောင်နေပြီဟု သိရသည်။ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း၈သောင်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိ ယူရို ၅သန်းထောက်ပံ့ကူညီမည်ဟု ကြေညာထားမှုအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်များအရ လုပ်သားတစ်ဦးကို တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ငွေကျပ် ၇၅,၀၀၀ စီဖြင့်် ၃ လ အထိ ရမည်ဟု သိရှိရသည်။ ထောက်ပံ့ငွေများကို လူအများနှင့်ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် Wave Money မိုဘိုင်းစနစ်ဖြင့်လုပ်သားများထံ တိုက်ရိုက်ငွေ လွှဲပြောင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် လွှဲပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်း ပထမအသုတ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်းက လုပ်ငန်းများရပ်နားခဲ့ရသော စက်ရုံခြောက်ခုမှ လုပ်သားများ ပါဝင်သည်ဟု အီးယူကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ နောင်လာမည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း လုပ်သားပေါင်း […]
မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲရတော့မယ့် နေ့စဉ် လူမှုဘဝနှင့် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲရတော့မယ့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ် လူမှုဘဝနှင့် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်…ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ လက္ခဏာတွေက နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားတာလို့ အစောပိုင်းကသိရပေမယ့် ခုကျတော့ အစာမကျေတာ အနံ့မရတာတွေလဲ ပါလာတယ်တဲ့။ ကိုရီးယားမှာ Positive ကပျောက်လို့ ဆေးရုံကဆင်းပြီးတဲ့ လူနာတွေထဲ မှာလဲ ပြန်ဖြစ်တာ ၁၅၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-ပါတ်ကျော်က သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ အိန္ဒိယ မှာ lockdown လျှော့ပေးပြီးနောက်ပိုင်း ကူစက်ခံရသူ ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၁၇၆၈ ဦးရှိတဲ့အတွက် ပဉ္စမ မြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားပါပြီ။ အမေရိကမှာလဲ ဖြေလျှော့မှုလုပ်ပြီးနောက် တစ်ရက်ထဲ ကူးစက်သူ ၃၀၀၀ လောက်ရှိတယ်တဲ့။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က လူရဲ့ အရေပြားကိုဖောက်နိုင်တာမဟုတ်ပေမယ့် လူရဲ့အတွင်းပိုင်းကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်နှံ့ပေါက် ပွားမှုအရမ်းမြန်သတဲ့။ […]
ဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ခု
ဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ခု ယနေ့ခေတ်ကားတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိနေပါပြီ၊ ပြီးတော့ကွန်ပြူတာတွေကလည်း အားလုံးကို ချောမွတ်အောင်သွားစေနိုင်ဖို့၊ လွဲမှားနေတဲ့အမိန့်ပေးမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတဲ့ ကားပိတ်ခြင်းတွေ၊ ကားမောင်းသူတွေကို ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ငြင်းဆိုနိုင်စွမ်းတွေက ကောင်းတာတွေဖြစ်လာစေဖို့ အတွက်ဦးတည်နေပါတယ်၊ ၁။ စက်နှိုးသော့ကို သော့တံတွေအများကြီးနဲ့ တွဲမထားပါနဲ့ သော့တွေအများကြီးတွဲထားတာက စက်နှိုးသော့ရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုးစေပြီး သော့တပ်တဲ့အပေါက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ကားသော့မှာ သော့နှစ်ချောင်းတွဲလောက်ပဲထားပါ၊ ၂။ ဆီပြောင်းပါ ထုတ်လုပ်သူတွေညွန်ကြားထားတဲ့ ဆီဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကို လိုက်နာပါ၊ အကြောင်းရှိပါတယ် များသောအားဖြင့် ကားသစ်တွေ ဟာစက်ရုံကမထုတ်မီ ပါးလွှာတဲ့ ဆီကိုသုံးပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ၁၀၀၀ ကီလိုမီတာမောင်းပြီးရင်တော့ ဆီပြောင်းပါ၊ ၃။ အင်ဂျင်ကို ဆီ အပြည့်မဖြည့်ပါနဲ့ အင်ဂျင်ရဲ့ ဆီလှောင်ကန်မှာ ပြည့်မပြည့်ဖော်ပြတဲ့အရာပါပါတယ်၊ […]
7th May 2020 Editor
ခြင်ပြေးစေတဲ့ ရနှေေးကွမျးအိုးထဲက လကျဖကျခွောကျဖတျ
ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ မလွှင့်ပစ်ဘဲ အကျိုးရှိတယ်အောင် ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ် ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ မလွှင့်ပစ်ဘဲ သုံးတတ်ရင် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးကတော်တော်ညှီတဲ့ ငါးဆိုရင် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်နဲ့ အတူ ညှီနေတဲ့ငါးကို အိုးတစ်ခုတည်းထည့်ပြုပ်လိုက်ပါ။ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ရောပြီး မှန်ပြတင်းပေါက် အိမ်သုံးပစည်းနဲ့ ရွှံ့ပေနေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ဆေးကြောပွတ်တိုက်ပါ။ ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ သန့်ပြီးတောက်ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည်အဖြစ် အပင်တွေကို လောင်းပေးနိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာကို ရရှိစေပြီး အပင်တွေကို သန်စွမ်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး ကြက်ဥနဲ့ ပြုပ်စားရင် မွှေးကြိုင်ပြီး အရသာ ရှိလှပါတယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်ကို အခြောက်လှမ်းပြီး မီးရိူ့ိရင် […]
ပေါင်သွေးခဲသွားလို့ တစ်မိသားစုလုံး ထမင်းငတ်တော့မယ့် ကောင်မလေးကို အချိန်မှီသွားရောက် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ သူတတ်နိုင်သလောက် ချို့တဲ့ ခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေကို လှူဒါန်းကူညီပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာကောင်းတဲ့ ယုန်လေးက အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ လူတွေများစွာကို စိတ်ရင်းနဲ့ ကူညီပေးနေသလို သူ့ကိုပြန်ပြီး ကူညီကြတဲ့သူတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ယုန်လေးက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက လူမှုစာမျက်နှာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မိသားစုကို သွားရောက်ကူညီခဲ့ကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ “တောင်ဒဂုံ က မိသားစု ၅ယောက်ကို ရှာကျွေးနေတဲ့ ညီမလေး ပေါင်သွေးခဲသွားလို့ ၆လ နားရမယ့် ညီမလေးဆီကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ အစ်မကဆုံးသွားပြီး ကျွန်တော်လို မိဘမဲ့ အဖြစ် ကလေး ၃ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုတော့ ဘဝတူတွေ ဖြစ်ကြောင်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်မိသားစုလုံး စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဘယ်သူ့မှမပြောဘူး ကြိတ်ပြီး ဆန်ပြုတ်လေးပဲ သောက်နေတာ။ သတင်း Media တစ်ခုက […]
Previous 1 … 594 595 596 … 611 Next